SUSE Linux Enterprise 15 ichave neWayland nekukasira | Linux Vakapindwa muropa
SUSE Linux Enterprise 15 ichave iine Wayland nekukasira
Mukati mevhiki rino kuvandudzwa kweUbuntu 18.04 Bionic Beaver hakuna kutanga chete, asi zvimwe zviitiko zvatangawo seLinux MInt 18.3 kana SUSE Linux Enterprise 15. Kubudirira kweiyo yekupedzisira kunonyanya kushamisa ichave yekutanga vhezheni yeSUSE Linux kuve neWayland se graphical server. Chimwe chinhu chinokatyamadza nekuti SUSE Linux Enterprise 15 iri bhizinesi vhezheni, inoitirwa makambani nemabhizimusi mahombe uko kugadzikana kunotungamira uye ruzivo rwunowanzo kushomeka nekuda kwenjodzi dzayo huru kumakambani.
Zvakadaro, Wayland ichave iri graphical server yeSUSE Linux Enterprise 15 pamwe nedzimwe shanduko dzinoda kuti vashandisi vekuparadzira vaite shanduko kumagadzirirwo avo. Asi ichi hachizove chinhu chinoitika nehusiku. Parizvino, svondo rino chirongwa chakavharwa chekuvandudza beta chichatanga. Gare gare, mamwe mana ma beta shanduro achaburitswa, achiteverwa ne3 RC vhezheni, zvichizopera iyo yekupedzisira vhezheni muna Kubvumbi 19, 2018.
Wayland haisi iyo shanduko huru. Iyi graphic server inoperekedzwa inosanganisira GCC 7, Python 3.6 nekutadza; 389 Directory Server ichatsiva OpenLDAP seLDAP server; Firewalld inotsiva SUSEFirewall2 seFirewall; uye, Chrony seNTP. Kugoverwa kuchatarisawo mukugadzira imwe nharaunda yekushandiswa kwemidziyo yepasirese, zvichiita kuti zvive nyore kushandisa mhando iyi yemidhiya kuisa software nyowani. Uye mapuratifomu matsva achange aripo. Saka, zvinofanirwa kucherechedzwa ARM server mapuratifomu ayo achave aine yakasarudzika vhezheni yekusunungurwa kwakatevera kweSUSE Linux Enterprise 15.
SUSE Linux inogoverwa yakabhadharwa, asi kushandiswa kweWayland kana humwe hutekinoroji kunoratidza kuti budiriro yacho yakura zvakakwana kuti ishandiswe mushanduro iyi uye nekuwedzera, inokodzerawo OpenSUSE, kugoverwa mahara kwekambani yeSUSE.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SUSE Linux Enterprise 15 ichave iine Wayland nekukasira
Yangu yekutanga Linux distro yaive: SUSE Linux 9, ndakaenda kunovhuraSUSE 10, 11 na12, kozoti Novell, aive muridzi webudiriro iyi (https://es.wikipedia.org/wiki/SUSE_Linux); Ini ndakaenda kuDebian uye ikozvino ndoona kuti SUSE ikambani, kana ini ndinozvivandudza ... kana munyori anozvinyora pachayo pachinhu, chero chinouya kutanga.
Kusvika pandinogona kunzwisisa: Novell ikambani uye SUSE Linux ndicho chigadzirwa.
Parizvino Micro Focus muridzi weNovell, SUSE, NetIQ uye HPE, zvisinei ini ndinogona kukuudza kuti SUSE inoenderera ichishanda sekambani uye kugadzira zvigadzirwa zvichibva pane yakanzi solution SLE, SLED, SLES, SUSE Openstack, SUSE MicroOS, SUSE Enterprise Storage, SUSE CaaS , pakati pevamwe.
Parizvino Micro Focus muridzi weNovell, SUSE, NetIQ uye HPE, zvisinei ini ndinogona kukuudza kuti SUSE inoenderera ichishanda sekambani uye kugadzira zvigadzirwa zvichibva pane yakanzi solution SLE, SLED, SLES, SUSE Openstack, SUSE MicroOS, SUSE Enterprise Storage, SUSE CaaS .